Ukusetyenziswa kwamacandelo angaphezulu kwiintlanzi kubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili. Oku akusiyo nje inkokhelo kwimoya yanamhlanje, kodwa kwakhona isixhobo sabantu bonke abafuna ukubonakala bengenakunqunyulwa, kodwa ngenxa yezinto ezingokwemvelo abanakho ukuphupha kwendalo, ukutshitshiswa kweenwele. Kwakhona, amaqhosha aphezulu anokuvumela ukuba usebenzise isitala sakho kunye nokubonakala ngaphandle kweenguqu zabo eziqhelekileyo, kwaye xa kwenzeka ukuba into engayithandiyo, unokuyilungisa ngokukhawuleza nje ngokukhupha ikhonkco leenwele kunye neentambo zeenwele zakho.
Ngoko ke, ukusebenzisa, kunye nemigangatho yemvelo kwizinwele zezintombi zebhinqa zifanelekileyo, njengemizuzu embalwa kwaye ngaphandle komgudu omkhulu, unako ukwandisa ubude beenwele, unike iinwele ukuba zenzeke ngokugqithiseleyo okanye zibe ngumthunzi kwaye, ngokwenene, ufumane intloko yeenwele - kunanoma iliphi iphupha amantombazana?
Ininzi eyaziwayo phakathi kwabasetyhini yinkxalabo ephezulu yoboya beSlavic, kuba iinwele zeSlav, ngokungafani nabasetyhini bezinye iintlanga, zibonakala zilula kwaye zibala, zithobela ngakumbi, ngokukodwa, njengama-blondes afanayo aseFinland.
Iintlobo zokusebenzisa iinwele ezingaphezulu kwezemvelo ezikhuniweyo phambi kwezinye iintlobo zobungcweti kunye nokulungiswa kwezinwele zicaca - unokutshintsha ngokuphawulekayo umfanekiso wakho oqhelekileyo ngexesha elifutshane kwaye wenze i-hairstyle ekhethekileyo, unike iinwele zakho ubuqaqawuli kunye nomthamo, ukwandise ubude bezinwele zakho kwaye wenze umbala wemibala, ngokudibanisa imida kwizinwele zakho, ukuvala umbala kumbala wezinwele.
Kukulungele ukusetyenziswa kwamacandelo angaphezulu - anamathele kwiziqephu ezikhethekileyo. Amandla kunye ne-barrette enye idla ngokufakwa phantsi kweenwele kunye nokusebenzisa kwabo ubuchule ngokungaqhelekanga phantsi kweenwele. Amagqabini amanga ngokuqhelekileyo afakwe kulo myalelo-ukuqala ngeemida ezide kakhulu kwaye zide kakhulu, kwaye ugqiba ngamagqabi amancinci. Okokuqala, "intambo" emithathu ihlanganiswe - kwii-barrettes ezintathu, ke zibophe iibharrettes ezine, ezokugqibela zixhomekeke kwiintempile, i-thinnest, kwi-barrette enye. Emva koko, xa zonke iintambo ezigqithisiweyo zivela kwizantsi okanye ngaphakathi kwekhanda, izinwele zakho zikhutshwe kwaye izinwele ezinqabileyo ziveliswa kwizinwele ezinde.
Amacu aphezulu aya kuthengiswa kwiiseti eziqhelekileyo, ubude bawo buyi-55-60 cm. Iifayile ezimfutshane kwiiseti zobuxoki zifikelela kuma-cmentimitha angama-50, elide kunabo bonke - amaqhosha amancinci anokuba nobude obuyi-70 centimeters. Iindleko zala maqoqo zixhomekeke kubude bamacandelo angaphezulu, inani labo kwisethi. Umgangatho osemgangathweni uqulethe umthamo olinganayo namanci ayikhulu ekwakheni.
Ukuba awukuhlangabezanisi ukhetho olukhoyo lwamacandelo angaphezulu, ungaya kwisikripthi esikhethekileyo sokunyusa izinwele uze wenze umyalelo ngamnye wemida yezinto ezingokwemvelo, ubude obufunayo, umbala kunye nomthamo. Ngokuqinisekileyo, oku kuya kuba neendleko ezincinci kunokuthenga isethi esimiselweyo yamacandelo angaphezulu, kodwa amaninzi amabhinqa akhetha ngokuchanekileyo imida enjalo eyenziwa ukuba ilandiswe.
Ngaphezulu kweenzuzo kunye nokuphazamiseka kweziqhelo ezingaphezulu okanye ezingamanga zendalo, zihlala zixubusha, kodwa iingxoxo kumacala omabini zibalulekile ngokwaneleyo ukuba azivumeli ukuxazulula le ngxabano. Ngokuqinisekileyo, imicu yemvelo ibonakala yendalo ngokwemvelo kwaye ilula, ingaba yenziwe ipeyinti, ikhutshwe kwaye iyenze nayo yonke into efanayo neenwele zakho. Kodwa zibiza kakhulu kunezixhobo ezingamanga zobuqhetseba kwaye zingabonakali njengokuba zikhona. Ngenxa yokukhanya kunye nokufikeleleka, imicu yokufakelwa ikhethwa ngabafazi abancinci befashoni, ebancedisa ukuba baphumelele kwiintlobo ezahlukahlukeneyo zolutsha - ii-discos, amaqela.
Kungakhathaliseki ukuba yintoni intambo engenziwayo, kodwa iingenelo ezingenakukhunjulwa kunye nokusetyenziswa kwemisebenzi ngaphandle kwee-wigs kunye neendlela ezahlukeneyo zokunika iinwele umthamo, kunye neenwele zebhinqa-ezikhangayo.
Unokukhetha njani i-shampoo efanele yeenwele?
Indlela yokuchonga uhlobo lweenwele
I-Ombre kwizinwele: inkqubo yokwenza umonakalo ekhaya
Ukutya kunye nemivilini ye-varicose
Iifutshane ze-Strawberry nge-cream cream
Iiphoso eziphambili zeeholide zasehlobo kunye nomntwana
Umshicileli weLasta: kusekuqaleni
I-chicken roll kunye ne-pistachio
Intsingiselo yemfihlo yokulala - izihlobo ezinokuliphupha